Indlela yokwenza i-Inference kwi-5 elula
Kubafundi nabazali TOEFL & TOEIC
Ukusebenzisa Ubungqina bokuxhasa Inkcazo yakho
Sonke kufuneka sithathe le mvavanyo ehambelana nomgangatho apho uhanjiswa ngendinyana enkulu yesicatshulwa kwaye kufuneka usebenze indlela yakho ngokusebenzisa iingxaki ezininzi zokukhetha ezilandelayo. Uninzi lwexesha, uya kuba nemibuzo ekucela ukuba ufumane ingcamango ephambili , ukugqiba injongo yomlobi , ukuqonda isigama kwisigcawu , uqonde ithoni yombhali , kunye nesihloko esiseduze, senze ingqinamba . Kwabaninzi abantu, ukuqonda indlela yokwenza inqaku elincinci kunazo zonke kwinqanaba lokufunda, kuba inqaku lobomi lobomi ludinga ukuqikelela.
Kwi-test-choice multiple, nangona kunjalo, ukwenza i-inference iyancipha ukufumana izakhono ezimbalwa zokufunda ezifana nezi zidweliswe ngezantsi. Bafunde, ke sebenzisa izakhono zenu ezintsha ngeengxaki zenkcazo echazwe ngezantsi.
Yiyiphi into echaziweyo?
Inyathelo 1: Ukuchonga umbuzo woMngcipheko
Okokuqala, kuyakufuneka uqinisekise ukuba ngaba unyanzeliswa ukuba wenze uvavanyo lokufunda. Imibuzo ecacileyo iya kuba namazwi "athetha," "ukuthabatha" okanye "ukungena" kwiphepha efana nale:
"Ngokubhekiselele kwinqaku, sinokuqiqa ngokucacileyo ..."
"Ngokusekelwe kwinqanaba, kunokucetyiswa ukuba ..."
"Yiyiphi enye yeengxelo ezilandelayo ezixhaswa kakuhle kwivesi?"
"Le ndinyana ibonisa ukuba le ngxaki ephambili ..."
"Umbhali ubonakala ngathi u ..."
Enye imibuzo, nangona kunjalo, ayiyi kuphuma ngaphandle kwaye ikucele ukuba uchithe. Kuya kufuneka ukuba unganise ukuba ufanele wenze inkcazo malunga nevesi.
Sneaky, hah? Nazi ezimbalwa ezifuna izakhono zokungena phantsi, kodwa ungasebenzisi lawo mazwi ngokuchanekileyo.
"Yiyiphi na ingxelo elandelayo enoba umlobi uyavuma?"
"Yiyiphi na yezi zivakalisi ezilandelayo eziza kusebenzisa umlobi ukongeza inkxaso engaphezulu kumhlathi wesithathu?"
Inyathelo 2: Yithemba i-Passage
Ngoku ngoku uqinisekile ukuba unombuzo ongenayo kwizandla zakho, kwaye uyazi ukuba yintoni na into efanelekileyo, uya kufuneka uvumele ukuhamba kunye nolwazi oluphambili kwaye ulisebenzise le ngqungquthela ukubonakalisa ukuba ukhetho olukhethayo oluchanekileyo.
Impikiswano kwiimviwo ezikhethiweyo ezihlukeneyo zihluke kwizinto zobomi bokwenene. Ehlabathini lenene, ukuba wenza uqikelelo olufundwayo, inqaku lakho lingasalunganga. Kodwa ekuphononongeni okukhethiweyo, ulwahlulo lwakho luya kuchaneka ngenxa yokuba uya kusebenzisa iinkcukacha kwinqanaba lokukubonisa. Kufuneka uthembele ukuba le ndinyana ikunika inyaniso kwimeko yokuvavanya, kwaye enye yeempendulo ezichaziweyo zichanekileyo ngaphandle kokunyuka kakhulu ngaphandle kommandla wendinyana.
Inyathelo lesi-3: Ukuzonda iiClues
Isinyathelo sakho sesithathu kukuqala ukuzingela iimpawu - iinkcukacha ezisekelayo, isigama, izenzo zomntu, iinkcazo, intetho, kunye nokunye-ukubonisa enye yeenkcazo ezibhalwe apha ngaphantsi kombuzo. Thatha lo mbuzo kunye nombhalo, umzekelo:
Umhlolokazi uElsa wayephelelise ngokupheleleyo umyeni wakhe wesithathu, kuyo yonke into kodwa ubudala, njengoko inokukhulelwa. Unyanzelekile ukuyeka umtshato wakhe wokuqala emva kokufa komyeni wakhe kwimfazwe, watshata nomntu iminyaka emibini kuye waza waba ngumfazi oyisibonelo nangona bengenanto efana nayo, kunye nokufa kwakhe eshiywe enenzuzo enhle, nakuba wanikela ebandleni. Emva koko, umfana oseningizimu, omncinci kakhulu kunoyena, waphumelela kwisandla sakhe, wamthabatha waya eCharleston, apho, emva kweminyaka emininzi engakhululekiyo, wafumana kwakhona umhlolokazi. Bekuya kuphawuleka ukuba ngaba nayiphi na imvakalelo yayisaphila ngobomi obufana no-Elsa; akunakwenzeka kodwa wachithwa aze abulawe ngokudumala kokuqala komyeni wakhe wokuqala, umthwalo onqabileyo womtshato wakhe wesibini, kunye nokungahambisani nomyeni wakhe wesithathu, owaye wamgxotha ngokuqinisekileyo ukuba adibanise nembono yokufa kwakhe kunye thu thuzela.
Ngokusekelwe kwingcaciso kwiphepha, kunokucetyiswa ukuba umlandeli ukholelwa ukuba imishado engaphambili i-Elsa ibe:
A. akanakukhathazeka, kodwa ufanelekile ku-Elsa
B. eyanelisayo kunye no-Elsa
C. kubanda kwaye kuwonakalisa uElsa
D. ezinzima, kodwa uzuze uElsa
Ukufumana izikhombisi ezikhomba impendulo echanekileyo, khangela iinkcazo eziza kuxhasa ezo zichazi zokuqala kwimpendulo yeempendulo. Nazi ezinye zeenkcazo zemitshato yakhe kwindinyana:
"... waba ngumfazi onomzekelo nakuba bengenanto efanayo ..."
"... emva kweminyaka engakhululekiyo, wafumana kwakhona umhlolokazi."
"... umsebenzi onqabileyo womtshato wakhe wesibini kunye nokungahambisani nomyeni wakhe wesithathu owaye wamqhubela ukuba adibanise nembono yokufa kwakhe kunye nenduduzo yakhe."
Inyathelo 4: Nciphisa iChoice
Isinyathelo sokugqibela sokwenza uphawu oluchanekileyo kwiimvavanyo ezikhethiweyo ezininzi kukunciphisa ukhetho lweempendulo.
Ukusebenzisa izikhokelo ezivela kwinqaku, sinokuthi akukho nto "eyanelisayo" ku-Elsa ngemitshato yakhe, eyahlukana noKhetho B.
Ukhetho A aluchanekanga kuba nangona imitshato ibonakala ingenakunqweneleka ngokusekelwe kwiimpawu, ayifanelekanga njengoko yayingenanto efanayo nomyeni wayo wesibini kwaye yayifuna indoda yakhe yesithathu ife.
Ukhetho D alilunganga ngokuba akukho nto ichazwe okanye ichazwe kwindinyana ukubonisa ukuba uElsa wayekholelwa ukuba imitshato yakhe iyayixabisa ngandlela-thile; Enyanisweni, sinokuthi akukho nto ayifanele kuye kuba wayemnike imali kumyeni wakhe wesibini.
Ngoko, kufuneka sikholwe ukuba iConice C iyona nto ibhetele - imitshato iyabanda kwaye iwonakalise. Le ndinyana ichaza ngokucacileyo ukuba umtshato wakhe "ngumsebenzi onzima" kunye nomyeni wakhe wesithathu "wayengenabubele." Siyazi nokuba beyingozi ngenxa yokuba iimvakalelo zakhe "zatshatyalaliswa zabulawa" ngemitshato yakhe.
Inyathelo lesi-5: Yenza umsebenzi
Ukuze ulunge ngokwenene ekwenzeni ukungqinelani, kuya kufuneka uzenze ukuzithengisa kwakho kuqala, ngoko qalisa ngala maqhekeza okusebenza angabonakaliyo .
Indlela Yokubhala Umxholo Omkhulu we-TOEFL okanye i-TOEIC
I-TOEFL eziPhakamileyo zeZikolo eziPhakamileyo eziPhakamileyo nakwiiNgcaciso
3 Ukuqwalasela ekukhetheni iNkqubo yoTitshala
Ngaba iiPagan kunye neWiccans kwi-Kinky Group Sex?
Kutheni kutshintsho kokuziphatha kuPhakamiso oluNtle kwiNgxaki zokuThatha
Ama-80s eSitcom Reunion Shows okufuneka ukuba kwenzeke
Ubufazi kwi "Lucy Show"
Izinzuzo zokwelapha zokugcina i-Journal
IsiNgesi esiphakathi (ulwimi)
I-Basketball Cheers, i-Chants ne-Yells
Imigaqo ye-Ping Pong yokugcina amanqaku